Manangana fandraharahana 40 no lohahevitra amin’ity andiany ity izay midika ho fisokafana amina teknolojiam-pifandraisana vaovao. Ankoatra izay dia betsaka ireo seha-pihariana hita any toy ny famokarana any ambanivohitra, ny fanafody, ny lamaody ary ny fizahantany izay saika mifanaraka amin’ny tetikasa azo atao eto Madagasikara avokoa. Ho an’ireo mpandraharaha te handray anjara amin’ity fihaonana atao any Milan ny 26 sy 27 novambra ity dia hohamoraina ny fahazoana ny VISA. Nifandamina ny mahakasika izany tamin’ny Consul honoraire an’i Italia ny minisiteran’ny raharaham-bahiny (MAE). Tsy halefa fotsiny amin’izao ihany koa ireo mpandray anjara fa ampiana amin’ny fihaonana amin’ireo mpandray anjara vahiny. Tsiahivina fa efa nahasarika ny mpandraharaha Malagasy hatrany ny mifanerasera amin’ny italiana nandritra ny IABW andiany 2 voalohany. Niteraka olana be anefa ny tsy fahatomombanan’ny fahazoana VISA, indrindra tamin’ny taon-dasa.